Tuesday February 18, 2020 - 12:17:19 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dalka Indonesia ugu yaraan 300 oo qof ayaa lagusoo waramayaa in ay qaateen diinta Islaamka kadib marki ay kasoo tageen Madahabtii Kufriga ahaa ee ay kujireen, waxaana lagusoo bandhigay Masjid ku yaala Jaziirada Sulawesi ee dhacda bartamaha wadankaasi
Maalinkii Jimcaha Salaadda Khudbada kadib ayaa dadkan gaaraya 300 waxaa lagusoo bandhigay Masjidka Al Furqaan ee ku yaala Mandiqada Morawali kadib marki halkaas lagu qabtay xaflad si heer sare ah loosoo abaabulay taas oo lagusoo dhaweynayay dadka soo hanuunay.
Dhambaan dadkan waxa ay kasoo jeedaan qabiilka Taawa Tawana ee kunool dhulka Buuralayda ah ee Tokala oo dhaca Baadiyaha Jazeerada Sulawesi horeyna waxay u heysteen Muctaqadka Ixyaaiyada oo ah mid shirka ah oo jiritanka alle lala wadajinayo wax ay ku sheegaan Arwaxda iyo wixii lamid ah.
Dadka qaatay diinta Islamka ayaa si diiran loogusoo dhaweeyay Masjidka Al Furqaan xafladdii lagu qaabilayay dadkan waxaa kasoo qeyb galay Culima’udin, Xubno ka socday hay’adda culimada ee dalka Indonesia, Arday, odayal iyo dad fara badan oo Muslimin ah, dhammaan dadka ayayna wajiyadooda ka muuqatay farxad aan la suuraysan Karin.
Xafladda soo dhaweynta waxaa lagu bilaabay Aayaadka Quraanka Kariimka ah Kadibna waxaa halkaasi Muxadaro dheer oo ku baxaysa Luqadda Indonesia ka jeediyey mid kamid ah Culimada kaas oo ka hadlay fadliga uu leeyahay Islaamka iyo in uu yahay diinta kaliya ee xaqqa ah taas oo qofkii ku dhagaa uu ku badbaadayo Adduun iyo Aakhiro.
Intaas kadib goob fagaare ah oo ku yaalla bartamaha Mandiqada Morawali ee hoostagta Jazeerada Salawesi ayaa boqolaalkan dadka ah ee kasoo wada jeeda halka qabiil waxaa loogu qabtay Towxiidka sidaas ayayna kaga mid noqdeen Malaayiinta Musliminta ah ee ku nool dalka Indonesia.
Mactaqadka Ixyaa’iyada oo ay dadkani horey u heysten, ayaa rumeysan Jiritanka inay Ruux leeyihin wax kasta oo aduunka yaala, haday tahay Aadanaha, Xayawanadka, Dhagxanta, dhirta iyo wixii lamid ah, waana Mabda;a baadil ah oo aan ku qotomin wax diin ah, sidoo kalena waa mid alle loogu shariik yeelayo, kaas oo qofki ku dhintaa uu ku naar tagayo.
Dadka u dhashay Qabiilka Taawa Tawana ee kunool dhulka Buuraleyda ah ee Tokala ayaa la rumeysan yahay in ay Arwaaxda beenta ah caabudayeen in ka badan 8 Kun oo Sano, Culimada dalka Indonesia ayaana sheegay invay raja weyn ka qabaan in talaabadan ay dariiqa u furi doonto Kumanaan dad ah oo kasoo jeeda isla qowmiyadan kuwaas oo wali ku dhagan Mabda’ooda Kufriga ah.
Sidaan si lamid ah Sanadkii 2017 boqolal qof oo katirsan Qabilka Orang Rimba ee ku dhaqan dalka Indonesia ayaa qaatay diinta Islaamka waxa ayna bilaabeen barashada diinta suuban ee islaamka iyagoo dhulkooda ka hir galiyay madaaris lagu barto Quranka Karimka ah, Masajid iyo Waliba Maraakiz inkastoo ay xusid mudan tahay in Qabiilkan uu ahaa mid badawi ah oo aan wax fikrad ah ka heysan Nolosha iyo dhal dhalalka ka jiro magalooyinka wadankaasi.
Boqolaal qof oo maalin qura cudurka Carona ugu dhintay dalka Talyaaniga.